Waa maxay sababta mareekanku uga horyimi "Heshiiska Qarniga" - Land Of Punt
Waa maxay sababta mareekanku uga horyimi "Heshiiska Qarniga"
Maamulka Maraykanku ma taageeri doono qorshahayaasha yuhuuda ee ku aadan dhulka ay ka haystaan falastiiniyiinta ee qaybo kamid ah daanta galbeed Jeruusalem ilaa ay wada xaajood la furan falastiin.
Maraykanku wuxuu u sheegay Isreal inaanu ku taageeri doonin qorshaha Isreal la damacsantahay daanta galbeedka Jerusalem ee ay doonayso inay lamidayso daanta bariga ee magaalo madaxda Isreal ka dhigatay ilaa ay si buuxda u taageerto waxa uu ugu yeedhay madaxweyne Trump heshiiskii qarniga ‘’the deal of the century’’ oo ay wada hadal dhamaystiran la galaan falastiin.
Usbuucan gudiisa maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu aqoonsan doono uuna taageeri doono dhulka daanta galbeed ee ay Isreal haysto, lakinse waxay shuruud uga dhigeen xukuumada aqalka cadi oo ku bogaadinyeen ra’iisal wasaaraha Isreal Benjamin Netanyahu inuu joogiyo dhul boobka dhinaca daanta galbeed ee falastiiniyiinta iyadoo aan la meel marin qorshaha nabadaynta ee Trump ‘’heshiiska qarniga’’, waxa ka mid ah heshiiska in loo sameeyo falastiiniinta ismaamul madaxbanaanidiisu xadidan tahay qaybta daanta galbeedka loo dhigo magaalo madax.
Sarkaal sare oo maraykan uhadlayey ayaa usheegay ‘’ meelkasta oo ay Isreal haysato waa in loo ogalaadaa falastiiniyiinta dalabkooda si loo gaadho dawladnimo ku salaysan shuruudaha gaarka ah ee xaaladaha cibirida dhulalka iyo taageero dhaqaale oo deeqsimo leh.
‘’waxaanu diyaar u nahay inaanu aqoonsano ficilada Isreal ee lagu fidinayo madaxbanaanidooda aaga daanta galbeed waxaana shurrud ah waa in dawlada Isreal u ogolaanayso inay wadahadal lagasho falastiin iyadoo la raacayo khadadka lagu muujiyey aragtida mawaxwene Trump’’ sarkaalka ayaa sidaasi sheegay.
Fariintan waxa la gaadhsiiyey Netanyahu iyo kaaliyeyaashiisa si loo muujiyo sida ay uga go’antahay mareekan waxaana islasii gorfeeyey saraakiil Isreal iyo Maraykan ah ayuu u sheegay Anxios oo aqalka cad u hadlayey.
Safiirka Maraykan ka ee Isreal ayaa mar hore usheegay kaaliyayaashiisa Netanyahu in maraykan ku doonayo inuu meel mariyo qorshe nabadeed, kulan ay wada yeesheen gudiga samaynayey mappingka ama khariiradaynta cusub ee lala damcay dhulkaas laysku haysto ayaa lagu muujiyey qaybo kamid ah daanta galbeed inay raacsan yihiin Isreal oo keenaysa sua’sha mar hadii xataa intii khariirada lagu siiyey ee danta galbeedka inay falstiiniyiinta leeyihiin misna lagaga dabayimaado.
Heshiiska u dhexeeyey isbahaysiga Natenyahu iyo hogaamiyaha xisbiga Blue and White Benny Gantz waxa ku jiray shuruud ah in laga doodo ‘’fahamka’’ maamulka Trump, ee dhulka daanta galbeed, waxa kaloo ka mid ah in cod loo qaado parliament ka wixii ka danbeeya kowda July ayuu sheegay Anxios.
Khamiistii, koox ka kooban 12 safiir oo reer yurub u jooga Isreal oo ay ku jiraan safiirada UK, Germany, France, Italy ayaa ka mudaharaaday qorsha Isreal la damacsantahay daanta galbeedka falastiiniyinta loo qoondeeyey oo shirkoodi is-afgaranwaa ku dhamaaday ayaa tibaaxayaan xogaha kasoo baxaya agaasime kuxigeenka wasaarada arimaha dibada ee Isreal.
Safiirada shirk kaga kacay madaxda Isreal in qorsha cusub ee tilmaamaya in xataa daanta galbeed khasatan magaalada Jerusalem guud ahaan khalkhal gelinayo sheegashada dhul aan loo ogolayn saamaynkartana gobolka. Arinkaa hadii Isreal kusii adkaysato waxuu wax udhimaya mawqifka bulshada caalamka oo noqondoonta in Isreal ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah.
Kadib markii ay magaalada Qudus loo aqoonsadeen caasimada Isreal Diseember 2017 iyo inraali lagayahay qabsashadii buuraha Golan Heights ee suuriya bishii Maarso 2019 ayuu dhamaadkii bishii kowaad madaxweyne Trump daaha ka qaaday inlasoo wado ‘’heshiiskii qarniga’’ oo guud ahaan isbadal ku samayndoona wadamada bariga dhexe kaasoo ay wax badan isla afgarteen yuhuuda ku nool mareekanka.
Qorshahan oo ah mid aan dhamaystirnayn oo mugdi badan leh ayaa u ogolaanaya Isreal inay ku darsato qayb sadexaad oo ah degmooyin badan oo ka tirsan aaga dooxada Jordan oo daanta galbeed ah.
Heshiiska Qarniga ayaa siinaysaa falastiiniyiinta ismaamul madaxbanaanidiisu xadidan tahay oo ah jasiiradado yaryar ku dhexyaal Isreal kana durugsan caasimada Qudus, laakiin falastiiniyiintu heshiiska qarniga way qaadaceen si cadho leh ayey ugasoo horjeeshten qarshaha.
Qorshahan cusub wuxuu Isreal waxay si buuxda ula wareegi doontaa magaalada Qudus waxayna wadaan in aan Qudus hal magaalo oo ah caasimad Isreal noqoto. Yuhuudu waxay si sharci daro ah u qabsadeen bariga malaada Qudus oo uu kujiro Masjidul- Aqsa oo ah rugta sadexaad ee Islaam, sanadkii 1967. Falastiiniyiintu Qudus waxay u arkaan inay tahay caasimadooda dalka usoosocda mustaqbalka.
Heshiiska Qarniga Jared Kushner Jerusalem Natenyahu Qudus Trump